Mota Kushandisa Series Vatengesi uye Fekitori - China Mota Kushandisa Series Vagadziri
TS30 imotokari inoshandisa isina waya charger zvakare inobata mota. Ndiyo shamwari yakanaka kana uchishandisa nharembozha yako mumotokari. Kutonhora kutaridzika dhizaini, aluminium alloy kiramba ruoko uye ABS dzimba. Iyo inotsamira pakukwirisa kwekubatana kwechaja michina kudzora iyo kiringi kuvhura kana kuvhara, iri nyore kwazvo kushanda. Kukwikwidza nemativi matatu, kukiya foni yakasimba kana uchinge wasangana nemabhureki kana bhuru.
CW06 ndeye otomatiki mota inokwidza isina charger iyo inoshandiswa kuchaja nhare mbozha. Bata kubata, auto kuvhura uye kuvhara. Imwe yakapihwa kutora uye kusunungura, zviri nyore kushanda nekukurumidza nekuwedzera kuchengetedzeka. Strong anti-slip holder maoko, akapfava silicone mukati, hapana kukuvara kumotokari, ingoisa is ok. Tsigira 360 tenderera vhiri izere poindi yekugadzirisa, kusangana zvakasiyana zvinoonekwa zvinoda.
CW10 ndeye otomatiki mota inokwidza isina charger iyo inoshandiswa kuchaja nhare mbozha. Ndiwedzere guru coil, kuchaja kutendeuka rate kusvika kungangoita 80%. Nzira ina dzekuchaja, 3.5W-7.5W-10W-15W. Otomatiki kuzivisa ekuchaja zvishandiso, kuchaja ikozvino kutendeuka uye kugadzikana kutapurirana Maketani maviri ane simba, dhizaini ina akapfava silicone mapads anodzivirira foni. Hazvina mhosva kuti mugwagwa une mabhuru zvakadii, unodzivirira foni yako nokungwarira.